တစ်နှစ်တာအတွင်း သရုပ်ဆောင်ကြေးအများဆုံးရရှိတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသား(၁၀)ယောက် – XB Media Myanmar
2018 ခုနှစ်ကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ရပြီဖြစ်သလို အခု 2019 ခုနှစ်မှာလည်း ကောင်းပေ့၊မိုက်ပေ့ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ များစွာထွက်ရှိလာတော့မှာကို ပရိသတ်တွေလည်း သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတော်တော်များများ ၀င်ငွေသောက်သောက်လဲကောင်းမွန်ခဲ့တာကြောင့် သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ တစ်နှစ်တာရရှိတဲ့ ၀င်ငွေတွေဟာလည်း အရင်နှစ်တွေကထက် ပိုမိုများပြားလာတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ 2018 ခုနှစ်မှစပြီး လတ်တလောအချိန်အထိ ၀င်ငွေအများဆုံးရရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကြီးတွေ (၁၀)ယောက်စာရင်းကို Forbes မဂ္ဂဇင်းက ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာကြောင့် ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်နေရာမှာရပ်တည်နေကြလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် …
Captain America အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Chris Evans ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $34 million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် နံပါတ်(၁၀)မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဘောလီးဝုဒ်မင်းသားချော Salman Khan ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $38.5 million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် နံပါတ်(၉)မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
50 First Dates မင်းသားချော Adam Sandler ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $39.5 million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် နံပါတ်(၈)မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဘောလီးဝုဒ်မင်းသားကြီး Akshay Kumar ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $40.5 million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် နံပါတ်(၇)မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
I Am Legend မင်းသားချော Will Smith ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $42 million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် နံပါတ်(၆)မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
Hong Kong actor Jackie Chan poses on the red carpet during the opening ceremony of the Shanghai International Film Festival (SIFF) in Shanghai on June 13, 2015. The 18th Shanghai International Film Festival runs from June 13 to 21. AFP PHOTO / JOHANNES EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)
The Foreigner မင်းသားကြီး Jackie Chan ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $45.5million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် နံပါတ်(၅)မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
Thor မင်းသားချော Chris Hemsworth ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $64.5 million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် နံပါတ်(၄)မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
Iron Man မင်းသားချော Robert Downey Jr. ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $81 million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် တတိယမြောက်နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။2. Dwayne ‘The Rock’ Johnson
Rampage မင်းသားကြီး Dwayne ‘The Rock’ Johnson ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $124 million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် ဒုတိယမြောက်နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
Tomorrowland မင်းသားကြီး George Clooney ဟာ 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ၀င်ငွေ $239 million ရရှိထားတာကြောင့် တစ်နှစ်တာအတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် ထိပ်ဆုံးကနေ ရပ်တည်နေပါတယ်။